Ebumnuche Ntanetị Budget Dị Mkpa Maka Obere Ahia | Martech Zone
Maraworị na ị nweghị ego ịzụ ahịa iji soro “ụmụ okoro” na-asọ mpi. Mana ozi ọma bụ nke a: ụwa dijitalụ nke ịre ahịa emeela ka ubi ahụ dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Obere ulo oru nwere otutu ebe na uzo esi abuo di nma ma di kwa ala.
Otu n'ime ndị a, n'ezie, bụ ịre ahịa ọdịnaya. N'ezie, ọ nwere ike ịbụ ihe kachasị ọnụ ahịa-azụmaahịa niile. Nke a bụ usoro ịre ahịa ọdịnaya nke obere azụmaahịa ọ bụla kwesịrị iji:
IZIRingTA na Imekọrịta
Ulo oru di na mpaghara ghotara uru nke ịkparịta ụka n’ --ntanet - ime ka mmekọrịta gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n’ime obodo nwee uru ga-abara ha. Na okwu dijitalụ, enwere ike ịme otu ihe. IZIR canTA nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ:
Guzosie ike a LinkedIn profaịlụ ma sonyere ndi otu niile metụtara. Soro na mkparita uka n'ime ndi otu a, mee ka a mara gi dika onye okacha mara niche ahia gi, ma mee njikọ. Njikọ ndị ahụ nwere ike ibute azụmahịa na-abịa n'ụzọ gị, site na ntụgharị na aro.
Chọta azụmahịa na blọọgụ metụtara ma mee ka gị na ndị nwe / ndị na - ede blọgụ nwee mmekọrịta. Debe mmekọrịta bara uru, na-akwalite ibe gị. Otú ọ dị, buru n'uche na mmekọrịta ndị a ga-enwerịrị ndị nwere aha ọma na ndị metụtara ya, ma ọ bụ ị nwere ike ịta ahụhụ SEO.
Mgbe ịtọsịrị mmekọrịta ndị a, tụlee ịmekọrịta site na mkpọsa nkwado nkwado, onyinye na-enye, wdg. Nke a ga-eme ka ndị ahịa gị mụbaa ma gbasaa akara gị na ndị ọzọ.
Nọgide na-enwe a Blog
Nke a bụ ngwa ahia dị ogologo oge mana ọ nwere ike ịdị irè. Ego ole? Ezigbo oge na mgbalị na -emepụta ihe ndị na-akpali akpali ma na-etinye aka na blọọgụ ịchọrọ ahịa gị bara uru. Ihe ntinye ederede ga - edozi nsogbu maka ndị ahịa gị; ekwesiri ide ha; ha kwesiri itinye ihe nlere na mgbasa ozi ndi ozo; ha kwesiri iketa oke nfe; ha kwesiri ịdị mfe ọgụgụ na nyocha.
Nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe banyere ịde blọgụ site n'ịgụ blọọgụ ndị na-ewu ewu na nke ọma nke ndị asọmpi gị na niche ndị metụtara ya. Ihe ịma aka gị ga-abụ ọ bụghị naanị na ịmepụta akụkụ ndị a ma na-agbanwe agbanwe ma na-ebipụta oge niile na mbipụta gị. Enwere akụrụngwa na ngwaọrụ nwere ike inyere gị aka ime nke a.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ ndị na-ede akwụkwọ nkwekọrịta, ị nwere ike ịnwale ụfọdụ ọrụ ederede nwere ọrụ ederede, dịka Edemede or FlashEssay.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nyocha, ịnwere ike ịnweta Nlekọta OnlineWriters ma nweta nyocha nke ọrụ ndeputa nke ụlọ ọrụ ndị ọhụụ kachasị elu
Lelee saịtị ndị na-enye ndị edemede na-enweghị akwụkwọ, dị ka Upwork na Agbanye. Nwere ike inyocha ahụmihe ndị odeakwụkwọ dere na ihe ịga nke ọma ya wee nwaa ole na ole.
Ọ bụrụ na ị kpebie ide ma debe blọgụ n'onwe gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịhọrọ iji ndị edemede edepụtara, ị ka ga-ewepụta echiche isiokwu maka blọọgụ ndị ahụ. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịlele ndị asọmpi gị wee hụ nke n'ime ọkwa ha kacha ewu ewu. Were echiche ndị ahụ ma melite ha. I nwekwara ike lelee saịtị dịka Buzzsumo ịchọta isiokwu ndị na-ewu ewu na niche gị.
Nka ihe Elevator Ẹtop
Chọrọ ihe okike 30-nke abụọ okwu na ị nwere ike iji n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla, mgbe mmadụ jụrụ, Kedu ihe ị na-eme? A na-akpọ ya elevator pitch n'ihi na ị ga-enwe ike inye ya ngụkọta na oge ọ na-ewe iji na-agba ịnyịnya igwe mbuli elu ma ọ bụ ala. Ogige a ga-abụrịrị ihe ejikere ma lekwasị anya na uru ị na-ewetara ndị ahịa / ndị ahịa gị. Nwere ike inyocha ụfọdụ akwa mbuli pitch ihe atụ na ejiji otu maka onwe gị. Buru ya n'isi. Ma nwee kaadị azụmahịa gị dị njikere inyefe n'otu oge ahụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ kwenyere na email anaghị adị irè ọzọ (igbe igbe ndị mmadụ jupụtara na njedebe na nkwalite na mgbasa ozi), nke a abụghị n'ezie ikpe ahụ. N'ezie, ná nkezi, ndị nloghachi maka $ 1 niile emere na ozi email bu $ 38. Nke ahụ mara mma-akwụ ụgwọ.
Isi ihe bụ ime ya nke ọma na ndị mmadụ na-enyocha ozi ịntanetị ha ga-achọ imepe nke gị. Lee ụfọdụ ndụmọdụ:
Adịla ịbụ onye spammer. Azụla ndepụta na zipu ozi ịntanetị - ha anaghị arụ ọrụ
Jiri nwayọ bulie ndepụta gị site na ịnweta ndị debanyere aha site na ebe ndị ọzọ ọdịnaya gị - weebụsaịtị gị, blog gị, ọwa mgbasa ozi gị
Mepụta ndepụta gị dịka ọnọdụ gị / ndị ahịa gị nọ na njem njem ha. Ha kwesịrị ịnata ozi ịntanetị dị iche iche.
Mụọ ozi ịntanetị nke gị onwe gị na-enweta site na azụmaahịa ndị na-achọ gị. Kedu ihe na - eme ka imeghe ụfọdụ n’ime ha ọ bụghị ndị ọzọ? Nke a kwesịrị inye gị ụfọdụ ezigbo echiche banyere ịkpụ aka gị.
Lekwasị anya na isiokwu isiokwu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe siri ike, ị nwere ohere ka ukwuu imeghe. Jiri dịnụ ngwaọrụ maka ịmepụta nnukwu akụkọ, ma ọ bụrụ na ịchọghị imepụta ihe n'onwe gị. Na, enwere ike iji ngwaọrụ ndị a maka isiokwu / aha nke blọọgụ gị na ntanetị mgbasa ozi.
Dị ka Shelly Crawford, Isi nke Ngalaba Ọdịnaya na Malitegharịa, kwuru, sị: “O were anyị oge ịchọpụta ihe a niile banyere ire ahịa email. Anyị na-atụpụ ozi ịntanetị n'ebe ahụ, na-enwe olileanya iwepụta ọbụlagodi obere nzaghachi. Ozugbo anyị mere mkpebi iji gaa nke a n'ụzọ ezi uche dị na ya, iji data na nkewa, yana ụfọdụ ihe okike dị ezigbo mkpa na usoro isiokwu, anyị hụrụ nnukwu mmeghe na-emepe. "
Nke a na-aga n'ekwughị. Ma eleghị anya ị gụọla gbasara mgbasa ozi mgbasa ozi iji mara ihe ndị a:
Nweghị ike ịnọ n’elu ikpo okwu ọ bụla - ị ga-agbasa onwe gị oke karịa ma ghara inwe ike ịkwado nke ọ bụla n’ime ha nke ọma.
Chris Mercer, onye isi oche nke Citatior, tinye ya otu a:
Ndị ahịa anyị dị obere, ọkachasị ụmụ akwụkwọ. Anyị na-elekwasị anya na Facebook, Instagram, na Snapchat n'ihi na anyị maara na anyị ga-ahụ ha ebe ahụ. Ndụmọdụ m bụ ịga naanị ebe ịmara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya na biputere ọtụtụ oge ọ bụla enwere ike. You'll ga-enweta nsonaazụ.
Mee nyocha iji chọpụta ebe ndi na ege gi nti no na soshal midia, ma họpụta nyiwe abụọ kachasị elu iji gosipụta ọnụnọ gị. Mgbe ahụ, biputere oge niile naanị ndị ahụ. Nke a bụ ihe njikwa.
Tụlee otu isiokwu maka ọkwa gị. Isi okwu a bụ ịme njikọ nke onwe na mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị. Nwere ike inwe egwuregwu nke ụbọchị, okwu mkpalite maka ụbọchị ahụ. Ndị na-eso ụzọ ga-abịaghachi na ha ga-ekekọrịta.
Banyere ndị ahịa gị - jiri nyocha na nyocha; atụmatụ ahịa na gị posts. Gosi ndi mmadu gbasara ahia gi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ihe ndị a nke ọma. Soro ha ma emomie otu ha si eme ihe.
Nlere na Mgbasa Ozi - Can Gaghị Emeli Na-enweghị Ya
Ebe E Si Nweta Foto: Neomam
Dabere na research, ndị mmadụ soro ntuziaka na ederede na ihe osise na-eme 323% ka mma karịa ndị mmadụ na-eso ntuziaka na-enweghị atụ.
Ọ dịbeghị mgbe ọ dị mfe iji visuals (foto, infographics, drawings, na ọbụna animation) na ọdịnaya gị. Vidio abụrụla ihe kachasị ewu ewu maka ị nweta ndị na-ege ntị ọdịnaya. Ndị mmadụ ga-ekiri vidio karịrị ịgụ ọtụtụ ederede.
Nchọgharị Google maka ngwaọrụ iji mepụta nke ọ bụla n'ime ihe ngosi ndị a ga-eweta ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọtụtụ n'efu. Enweghị ihe ngọpụ maka ịghara ịpụpụ ọtụtụ visuals na vidiyo dịka ị nwere ike iwebata ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, iji gosipụta gị na ndị otu gị, ịkọwa ma ọ bụ nye otú na- ọzụzụ, wdg.
Nwere ike ịnwale nnwale dị adị na nke mebere eziokwu - enwere ngwaọrụ iji mee nke a.
Cheta nke a: onye ahịa nke oge a chọrọ ịhụ ezigbo azụmaahịa. Bụ onye amateur na imepụta ihe ngosi na vidiyo bụ ụzọ dị mma iji mee nke a. Ndị na-erughị iwu, nke ka mma.
Nke ahụ bụ Kechie
Dịka obere onye nwe azụmaahịa, oge gị dị oke ọnụ ahịa. Mana ahia gha aburiri nnukwu oge na mgbali igha. I nweghi ike itolite na enweghị ya. Mana ahia ghaghi “ihapu ego” n’ihe banyere mmefu ego gi. Have nwere ọtụtụ nhọrọ ugbu a maka azụmaahịa dị ọnụ ala - jiri ha.
Tags: buzzumochris mercerobodoelevator pitchemail Marketingedemedefivverflashessayakụkọneomannetwọkịde ihe n'ịntanetịmaliteghachiịkparịta ụka n'socialntanetarụ ọrụ
James kwa ụbọchị
James Daily bụ ọkachamara na-ede akwụkwọ na ọkachamara ahịa ọdịnaya. Mgbe ọ naghị etinye aka na ọrụ metụtara ọrụ, ọ na-agbaso ọtụtụ ọdịmma ya, gụnyere ịgụ kpakpando, akparamaagwa, na sinima. Enwere onwe gị ịkpọtụrụ ya site na blọgụ nke onwe ya Brain.